Umhla My Pet » 5 Ideas ukuba umxhasi Romance
5 Ideas ukuba umxhasi Romance
ukubuyekezwa: UCanzibe. 20 2020 | 3 min ukufunda
ubudlelwane New zisoloko umdla, ukonwaba, kwaye uyakuthanda. Kodwa amava ezininzi ngumonde romance nangomdla njengoko ixesha lihamba. Ukuba ubona imiqondiso kwangoko ngokwaneleyo, ngoko apha ezintlanu izinto onokuzenza ukuze nekofu le romance kwaye uvelise loo yintlantsi zezi:
1. Secret amanqaku
Zama eshiya amanqaku encinane uthando kwiindawo engalindelekanga yokuba iqabane lakho ukufumana afika random yonke imihla yakhe. Shiya umyalezo kwi ebhegini iqabane lakho phambi kokuba intloko emseebnzini, iya ziqhakrazise ziyavela zawo kwaye sijonge phambili ekukuboneni emva kokuba umsebenzi. Beka ileta uthando elifutshane imithwalo abo phambi kokuba bahambe uhambo, wazithi ndiyazi uya kuphoswa kubo kwaye ukulinda de babuyele ekhaya. Bhala 'Ndiyakuthanda’ okanye uzobe intliziyo umphunga kwi esipilini negumbi kwixesha elizayo iqabane lakho kuthatha isiphango. Elizakuqhobosha inqaku kubiwe lo ubathandayo imoto enye ukuze kwixesha elizayo kufuneka ahambise imiyalezo.
Ukuya imayile ngokuyiphelisa ekhumbuza ezinye yakho ebalulekileyo sokuba ebalulekileyo kuwe kunokuba luncedo gqitha xa ezama ukwakha romance ulwalamano lwakho. Akuyi kuphela abanye umntu uyazi ukuba ucinga ngabo, kodwa wena uya kuhlala iingcinga zabo yonke imini kwakunye.
2. Fumana Okuninzi Physical
Khumbula ekuqaleni solwalamano lwakho? Amathuba okuba wena kunye neqabane lakho bonke phezu komnye, bebambene ngezandla zonke ithuba, esithi elide, hlukwana benehlombe ekupheleni umhla, kwaye egudle ngamnye elinye ithuba. Zikhumbuzeni ke imihla yakudala ngokwazana bunganothando ngakumbi neqabane lakho. Azabalazele ubambe izandla kunye neqabane lakho njengoko uhamba esitalatweni, ukudlala footsies phantsi kwetafile ngexesha lesidlo, kwaye unike omthandayo ngokumanga goodnight yakho elide ekupheleni kwemihla yakho.
Ukufumana kwenyama ngokuqinisekileyo kunokusinceda ukuvuselela romance ukuba belincipha. amathuba, neqabane lakho baya kuphatha ngayo imiqondiso yakho uze uphendule nabo ngothando kunye romance.
3. Qhubekani uhambo Kuba ezimbini
Kulula kakhulu ukuba umphefumlo ngemihla ukufumana ngendlela ngokuthandana. Maxa ngokunyanisekileyo uzive ngathi awunalo ixesha romance. Indlela kakhulu ukufumana kude yonke into kwaye kugxininisa kwakhiwe ubudlelwane kuni ngokuthatha uhambo kunye. Cwangcisa ikhefu okanye ngempelaveki iyinceda (kuxhomekeke kwixesha kangakanani ukuba kungokunivela) equka elininzi ixesha lokuphumla zabucala omnye intsebenziswano enye. Mhlawumbi mpela yokuzivavanya okanye ngeveki kwisiqithi luza kwenza iqhinga.
Ukuba imihla yobomi imini ungakwazi kude neqabane lakho, kusinda iziphazamiso ngokuthi ngokoqobo zibahambela zonke kuyo. Enokuyenza ulwalamano lwakho kwihlabathi okulungileyo ayekelele nobabini. Uya kuchitha ixesha ingqalelo omnye komnye, ayijonganga umsebenzi, isikolo, okanye zentsapho.
4. Nika Isipho
khumbula, ngenxa nje yokuba snagged mfo yakho okanye intombazana, akuthethi ukuba uyeke wooing kuye okanye. Amanye amadoda nabafazi kufuneka ngokuqhubekayo romanced kubudlelwane ukuze sizive sithandwa yaye wacela. Yenza iqabane lakho khumbula imihla yenu ethandana ngokumnika okanye isipho uxabiso. Izipho akunyanzelekanga ukuba kuthandazwe ukuba awuna mali kuba. A itshokolethi wavuka, indawo trinket encinane kancinane, okanye i-CD ezenziwe zakho ozithandayo iingoma uthando benze iqhinga.
Kunjalo unxulumano olomeleleyo awupheleli izinto eziphathekayo kunye nezipho, kodwa, xa nithandana nguwe nifuna ntoni ukuba bayakhe, isipho nokuba yintoni ufuna ukufumana ezo iimvakalelo bonisa uthando elibaleka kwakhona. Musa ukulinda de isikhumbuzo okanye yokuzalwa nokuba. A isipho kungekho sizathu Imiqulu ngaphezulu ifuthe ngaphezu isipho elilindelekileyo.
5. Qala Ukuthandana Kwakhona
Hayi, Andizimisele ndiphume ukufumana umntu omtsha. Ndinyanisa, Woyithabatha enye ubathandayo phandle ngemihla kwakhona. Lezibini ekukhe budlelwane ixesha elide kakhulu, ingakumbi abo bahlala kunye, basoloko belibala ngendlela imihla fun kunokuba. Baya kungena umlembelele ukwenza into yabo eqhelekileyo n aphuma yokutyela wawo sangokuhlwa, uyarenta bhanya, okanye kuphunywe ice cream n kodwa musa uwajongele phantsi amandla umhla ngokwenene xa uzama reignite romance.
Ekuqaleni ulwalamano, izibini ezininzi bayakuthanda wayephuma ukwenza izinto ezintsha kunye. Ku luyolo yaye umdla ukuya ngemihla kwiindawo u nga kunye. Zama ukwenza oku kwakhona. Kuphela kuya kuza ngemihla kwiindawo ezintsha kwimisebenzi nizonwabise ukunceda ukwakha romance, Kwakhona ke uya kunceda ekudalweni amaxesha ezintsha ezingalibalekiyo kunye kisattiza ngayo kamva.
khumbula, ubudlelwane kufuneka rhoqo bondliwe ziqwalaselwe ukuze ugcine romance bephila yaye lomelele. Ezi ngcebiso ezintlanu kunokukunceda kutsaleleka ezo iimvakalelo kwakhona, kodwa ingqalelo eqhubekekayo ukuze iqabane lakho kwaye babe nolwazi imo yobudlelwane bakho nangaliphi na ixesha elinikiweyo kuyimfuneko ukugcina abo iimvakalelo efudumeleyo liyavutha ngaphakathi kwenu kunye neqabane lakho.
Ndiyathanda Umhla Dream Umfazi wakho? Funda Iimbovane